Kedu ihe Amazon na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịkwado ndị ọhụrụ?
Ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ na asọmpi na ikwu okwu ọjọọ dịka Amazon, ị ga-eche ezigbo ihe ịma aka ihu. Ihe bụ na ọ bụghị ọrụ dị mfe iji nweta ihe ịga nke ọma na azụmahịa gị. O nweghịkwa mkpa ikwu na ndị na-ere ahịa bidoro na-enweta ohere ole na ole iji lanarị na Amazon na ntinye ngwaahịa ha na-adịbeghị anya. Dị nnọọ ka ịchọta ịchọta mkparịta ụka na Google, ihe ịga nke ọma ahịa azụmahịa na-esite na ọdọ mmiri dị mma họrọ maka isi ihe dị mkpa. N'ezie, echiche nke Search Engine Optimization (SEO) bụ maka ọdịnaya na isiokwu. Cheta, ọdịnaya bụ eze, ọ dị mma? Ma na usoro nke na-arụ ọrụ azụmahịa na mbupu na Amazon, ogo tracker toolkit maka isiokwu abụghịzi okomoko na-enye ụfọdụ uru n'elu gị ahịa ndị iro.
Na ọ bụghị naanị newbies, ma onye ọ bụla buru ibu na-ere na Amazon na-eji nsụgharị ngwá ọrụ na software nyocha iji nọgide na-adị ọhụrụ ma na-aga n'ihu nzọụkwụ n'ihu ndị kasị nso asọmpi . Ihe niile chọrọ njikwa na-aga n'ihu - na-amalite site na nyocha ọchụchọ ziri ezi, na nchịkọta njirimara ngwaahịa na njikwa ọnụahịa. Ọ bụ ya mere dịka onye na-ere akwụkwọ novice ị na-atụ aro ka ị gaa n'ihu na-ahọrọ ihe kachasị mma Amazon keyword ranking tracker ngwá ọrụ, ọ dịkarịa ala iji nwee mmalite siri ike. Ya mere, ebe a bụ ndepụta dị mkpirikpi nke nhọrọ kachasị egosipụta maka ịme mkpebi ma mesịa mepụta ndepụta ngwaahịa ndị na-ere. Ọfụma na e nwere ọtụtụ ihe dị mfe ma ka na-arụ ọrụ ndị bara uru na-agbalị tupu ihe ọ bụla ọzọ.
Ndepụta nke Amazon Isiokwu Ịnye ọkwa Tracker Ngwọta Na-atụ aro maka Beginners
The Sonar isiokwu ngwá ọrụ na-ịkụ nzọ tumadi na mgbagwoju search na indexing algorithms na-anakọta niile yiri data eji n'ezie shoppers na Amazon . Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ekwu na enweghi nhọrọ ụfọdụ dị elu karị, ọ bụ arụmọrụ multi-nzube bụ kpọmkwem ihe na - eme ka Sonar bụrụ nhọrọ kachasị elu nke ọ bụla ọhụrụ, ebe ọ bụ na ọ na-adịbeghị anya ọ wụsara n'ime ụlọ ọrụ ndị na-eji ụgbọ mmiri na-eburu ụzọ.
Okwu Ngwá Ọrụ bụ nhọrọ abụọ kachasị mma ịmalite na ịchọta Keywords dị mma maka ndepụta ngwaahịa gị - ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ọzọkwa - na ngwa pro Pro dị elu maka ndị ọkachamara nwere nkà, ị nwere ike ịnwale ya nke bụ isi maka kickstart, iji gbanwee iji chọpụta nchịkọta zuru ezu nke chọrọ ọ dịkarịa ala nghọta gị nke ọma.
Okwu ahịa bụ onye ndu zuru oke mgbe ọ na-abịa ịmepụta mkpirikpi okwu okwu ogologo oge. Naanị mmachi bụ na ụfọdụ ndị na-ere akwụkwọ ọhụrụ nwere ike ịnagide nsogbu nke nnweta na mba ha ma ọ bụ mpaghara ha.
KeywordInspector ga-abụ mkpebi gị nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ndepụta ngwaahịa gị na Amazon ka ị nọgide na-asọmpi, nyere gị na ụgwọ ọnwa ọ bụla maka ihe dịka dollar 40 abụghị oke ego maka mmalite gị.
Nkọwa Ahịa Sayensị na-akọwa aha ya n'onwe ya. Cheta, Otú ọ dị, ọ dị oke oke iji oge zuru ezu ma ọ bụ karịa maka ọchụchọ ọ bụla. Ka o sina dị, ọ bụ ihe ngwọta kachasị elu iji nweta nghọta miri emi nke isiokwu dị na Amazon. N'ezie, ọ gwụla ma ị na-etinyeghị aka na ngwa ngwa ngwa ngwa na ịza ajụjụ Source .